देउवाको राजकीय भारत भ्रमणको मिति तय, कहिलेदेखि कहिलेसम्म ? - Deshko News Deshko News देउवाको राजकीय भारत भ्रमणको मिति तय, कहिलेदेखि कहिलेसम्म ? - Deshko News
देउवाको राजकीय भारत भ्रमणको मिति तय, कहिलेदेखि कहिलेसम्म ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १ देखि ५ भदौसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने तय भएको छ । नेपाल र भारतको कूटनीतिकस्तरमा यो मिति टुंगिएको हो । केही दिनभित्रै औपचारिक मिति घोषणा हुने भारतीय कूटनीतिक स्रोतले जानकारी दियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।